Umdlalo Omde Omnyama (2014) - uphononongo | allans.pl
Umdlalo weLong Dark (2014) - uphononongo
431 izimvo 28 Novemba 2021 izimvoumdlalo 2014 ingxelo yomdlalo uphononongo lomdlalo ubumnyama obude ubumnyama obude
merlin (undwendwe)	 28 Novemba 2021 0 Izimvo
Ndingathanda ukubuza ukuba ukhona na kuni odlale iThe Long Dark? Ngaba kufanelekile ukudlala? Unamanqaku aphezulu kwi-Intanethi. Iigraphics aziphambani, kodwa zifanele ukuba ngumdlalo olungileyo. Luthini uluvo lwakho ngayo? Ngaba kufanelekile ukubuyela kwiminyaka eyi-7 ngexesha lokudlala oku?
umgca ubuze umbuzo 28 Novemba 2021
Zonke8.16K Yongezwe: Nge-28 ka-Novemba 2021
Jonga amangeniso afana ne Umdlalo weLong Dark (2014) - uphononongo
Isithunzi seTomb Raider-izimvo / uphononongo
Ithatha ixesha elingakanani i-GTA 5? Iimfuno ze-GTA V
Isixhobo somculo esidlalwa ngokuhambisa iingalo zakho phezu kwaso
Umfoti uJakub Grabowski (Umzobi wokuKhanya, Toruń) - uphononongo
Ukunyuka kwengxelo yeTomb Raider
Lumkela iSaziso sokuphelelwa lixesha DOMAINWEBCENTRAL umkhonyovu
Imidlalo efana ne-GTA (Grand Theft Auto) yePlayStation 4
Ngaba ngumsonto Umdlalo weLong Dark (2014) - uphononongo Ngaba iyakuchaphazela, inkampani yakho, ukuzala, imveliso okanye elinye ishishini?
Ngaba ukunxiba iilensi kwenza amehlo akho abone ngakumbi?
I-Samsung Galaxy J4 + -uyicwangcisa njani iringithoni kwaye uthathe umfanekiso weskrini (skrini)?